February 12, 2020 - MM Live News
February 12, 2020 MM Live News
ဘီပိုး၊ စီပိုးနှင့် ကင်ဆာရောဂါ အမျိုးမျိုးကို သင်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ တပင်တိုင်မြနန်း ဤဆေးကြီးသည် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်၍ နောက်ဆုံးဆေးရုံမှလက်လျှော့ကာပြန်ဆင်းလာသူများ ၃ လသာခံမည်။ ၆ လသာခံမည်။ ဟုဆိုသော လူနာများအား ကင်ဆာရောဂါမှ ငွေကြေး အကုန်အကျသက်သာစွာဖြင့်ပျောက်ကင်းလာကြသည် မှာမနည်းတော့ပါ။ အဓိက ပျောက်ကင်း နိုင်သောရောဂါများမှာ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ရင်သားကင်ဆာ၊သားဥပြွန်ကင်ဆာ၊အသည်း ကင်ဆာ၊အဆုတ် ကင်ဆာ၊ အစာ အိမ်ကင်ဆာ၊လည်ချောင်းကင်ဆာ၊ သွားဖုံးကင်ဆာ၊အရိုးကင်ဆာ၊အူမကြီးကင်ဆာ၊နား-နှာခေါင်းစသည့်ကင်ဆာရောဂါများကိုအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ဝေဒနာရှင်များ ဤဆေးကိုပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ အခြားပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါများမှာ-အသည်းရောင်အသားဝါ “B”ပိုး”C”ပိုး လေး ဘက်နာရောဂါ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ရေဖျဉ်းရောဂါ၊အစာအိမ်ရောဂါ၊ငှက်ဖျားရောဂါ၊အနာဆိုး၊အနာပျက်များ၊အဆီကျိတ်၊အသားကျိတ်နှင့်အခြား အဖုအကျိတ်အမျိုးမျိူး၊အရေပြားပေါ်ရှိယားနာ၊ဖြူနီကွက်များ၊ အဆုတ်ရောင် အဆုတ်ရေဝင်၊အဆုတ်ပွ၊ရင်ကျပ်ချောင်းဆိုးစသည့်ရောဂါများကိုသွေးလိမ်း သွေးသောက် ပေးရုံဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ Credit : ဆေးမြီးတိုမှတ်စု ဘီပိုး၊ စီပိုးနှငျ့ ကငျဆာရောဂါ အမြိုးမြိုးကို သငျသာပြောကျကငျးစနေိုငျတဲ့ တပငျတိုငျမွနနျး ဤဆေးကွီးသညျ ကငျဆာရောဂါဖွဈ၍ နောကျဆုံးဆေးရုံမှလကျလြှော့ကာပွနျဆငျးလာသူမြား ၃ လသာခံမညျ။ […]
မီးအမြန်ငြိမ်းပါစေ မီးအတော်များပါတင်္ရ် ရွှေစက်တော်ဘုရားမရောက်ခင် မင်းဘူး စကုမြို့နယ် အိုးပြင်မဲရွာမီးလောင်မှု့တစ်ရွားလုံးကုန်လောက်ပါပြီဗျာ …. အိုးပြင်မဲ‌ကျေးရွာ မီးလောင်မှုအ‌ခြေအနေ မင်းဘူး၊(စကု)မြို့နယ် မနက်ဖန် အမြန်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ရန်အားလုံးသတင်ပို့ထားပြီး အိမ်ခြေ ၅၀ ခန့် မီးလောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွှေစက်တော်မီးသတ်အဖွဲ့ကိုတော့ အကြောင်းကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ….. ဖုန်းတွေကလည်းမသိ အမှတ်တမဲ့ဘာကူညီရမယ်မသိ …. ရွှေစက်တော်မှမင်းဘူးဈေးသည် ရသမောင်ဝက်သားဒုတ်ထိုးဖုန်းဆက်မိတယ် …. ကြက်ခြေနီရုံးရှေ့ထွက်တာဆိုတော့ သူ့ဆီမှတစ်ဆင့် ဘုရားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ … မီးသတ်ဗိုလ်ကြီး သူမှမီးသတ်ရုံးအမြန်အကြောင်းကြားပေးလို့ ရွှေစက်တော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ ချက်ချင်းထွက်သွားပါတယ်….။ တစ်ရွာလုံးကုန်လုနီးပါးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ မကွေးတိုင်းကရွာလေးတစ်ရွာကမီးလောင်မှုပုံရိပ်များ photo credit / မူရင်း Credit / Copy ဝေ ယံ သင်္ဃန်းကျွန်း / သင်္ဃန်းကျွန်း သတင်းစုံ unicode မီးအမွနျငွိမျးပါစေ မီးအတျောမြားပါတင်ျရျ ရှစေကျတျောဘုရားမရောကျခငျ မငျးဘူး စကုမွို့နယျ […]
လူ4ယောကျဆိုငျကယျနဲ့လာသမြှ ဆိုငျကယျ‌တှကေားတှကေို ရဲဒငျးနဲ့လိုကျခုတျလို့ ကားနဲ့လိုကျတိုကျပွီးဖမျးလိုကျရတဲ့အဖွဈ
မန္တလေးပြည် ကြီးတံခွန်မြို့နယ် တွတ်ပီကွေ့တောင်ဘက်‌ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း လမ်6း0A*61လမ်းကြားမှာ…. လူ4ယောက်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာသမျှ ဆိုင်ကယ်‌တွေကားတွေကို …. ရဲဒင်းနဲ့လိုက်ခုတ်လို့ ကားနဲ့လိုက်တိုက်ပြီးဖမ်း လိုက်ပါတယ် …. တိုက်ဖမ်းတဲ့နေရာက လမ်6း0A ဗိုလ်ဗထူးလမ်း နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာ ကြားမှာပါ…..3ယောက်လွတ်သွားပြီး 1 ယောက်ကိုတော့ မိထားပါတယ်….။credit-ကျော့ကျော့ unicode မန်တလေးပွညျ ကွီးတံခှနျမွို့နယျ တှတျပီကှတေ့ောငျဘကျ‌ မငျးရဲကြျောစှာလမျး လမျ6း0A*61လမျးကွားမှာ…. လူ4ယောကျဆိုငျကယျနဲ့လာသမြှ ဆိုငျကယျ‌တှကေားတှကေို …. ရဲဒငျးနဲ့လိုကျခုတျလို့ ကားနဲ့လိုကျတိုကျပွီးဖမျး လိုကျပါတယျ …. တိုကျဖမျးတဲ့နရောက လမျ6း0A ဗိုလျဗထူးလမျး နဲ့ မငျးရဲကြျောစှာ ကွားမှာပါ…..3ယောကျလှတျသှားပွီး 1 ယောကျကိုတော့ မိထားပါတယျ….။credit-ကြော့ကြော့
ကလေးတှကေို ထူးခြှနျအောငျ ဟောဒီလို ပွုစုပြိုးထောငျပါ
ကလေးတွေကို ထူးချွန်အောင် ဟောဒီလို ပြုစုပျိုးထောင်ပါ ( ဆုတင် မှတ်စု ) ၁။ နေ့တိုင်း အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့် သင့်ကလေးနဲ့ အတူသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကိုဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပါ။ ၂။ ကလေးကို ငယ်စဉ်ကစပြီး သန့်ရှင်းရေး ကို နှစ်သက်ပါစေ။ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး ဂရုပြု နိုင်ပါစေ။ ၃။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ကလေး၏ စိတ်တွင်းစကားကို နားထောင်ပေးပါ။ထောက်ခံအားပေးသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် နားထောင်ပေးပါ။ ၄။ ကလေးကို သတိပေးတယ်ဆိုပြီး အနာဟောင်းကို တုတ်ဖြင့်ခဏခဏ မဆွပါနှင့်၊ သတိပေးစကား ခဏခဏ ပြောမိလျင်၊ ကိုယ်ပြောချင်တာပြော၊ သူလုပ်ချင်တာလုပ် ဖြစ်သွားမည်။ ၅။ ကလေး၏ အပြစ်ကိုတွေ့လျင် လေးလေးနက်နက် ပြောပြပေးပါ။ ဆွေးနွေးပေးပါ။ အပြစ် မှ တစ်ဆင့် […]
ကလေးတှကေို ထူးခြှနျအောငျ ဟောဒီလို ပွုစုပြိုးထောငျပါ…
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကနတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ် လူကောင်းကို အနိုင်ကျင့်ရတာ လွယ်တယ် ပုံပြင်ကလေးက ဒီလိုဗျ။ တခါက ရွာတရွာမှာ ရွာဦးနတ်ကွန်းဘေးမှာ ရေနှုတ်မြောင်း ဖြတ်စီးနေတယ်။ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်က မတ်တတ်ကိုယ်တော်ကြီး။ တနေ့တော့ လူတယောက်က မြောင်းဘောင်အတိုင်း လျှောက်လာပြီး ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးမယ်လုပ်တယ်။ အဲ့မြောင်းထဲမှာ ရေတော်တော်များနေတယ်။ ညက မိုးရွာထားတာကိုး။ ခုန်ကူးရအောင်ကလဲ မမီမကမ်းနဲ့။ မြောင်းထဲ ဆင်းကူးယင်လဲ ရေစိုမယ်လေ။ ပြီးတော့ ဒီလူကလဲ ခပ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်ကြီးကို ဆွဲချလာ၊ မြောင်းပေါ်ခွကျော်ပီး ချ၊ ပီးမှ နတ်ရုပ်ကြီးကို တုံးတံတားလုပ်ပြီး မြောင်းကို ကူးသွားတယ်။ ဟိုဘက်ကမ်းအဆင်းမှာ နတ်ရုပ်ကြီး မျက်နှာခွက်ကိုတောင် ဆောင့်နင်းသွားလိုက်သေးသတဲ့။သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ လယ်သမားကြီးတယောက် ရောက်လာတယ်။ သူကတော့ နတ်ရုပ်ကြီးမျက်ခွက်မှာ ရွှံ့ခြေရာကြီး ပေနေတာ တွေ့တော့ မျက်စေ့တောင် […]
မင်ျဂလာဆောငျသှား လူ၃၀ဦးခနျ့ပါ တုနျဖုနျးယာဉျခြောကျထဲထိုးကြ
ကောလင်းမြို့နယ်အဝေရာဘုရားကွေ့တွင် မင်္ဂလာဆောင်သွားလူ၃၀ဦးခန့်ပါတုန်ဖုန်းယာဉ်ချောက်ထဲထိုးကျ ကောလင်းမြို့နယ် ယွန်းအိုးကျေးရွာအုပ်စု ဒိုးပင်ကျေးရွာရှေ့ နေပူတောင်အဆင်း(အဝေရာ ဘရားကွေ့) မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၈၃ KM အရောက်တွင် …. ကသာဘက်မှ ရွှေဘိုဘက်သွားသို့ မင်္ဂလာဆောင်သွား တုန်ဖုန်းယာဉ်တစ်စီးပေါ် လူ ၃၀ ဦးခန့်ပါ အမြင့် ၆ ပေ ခန့်ရှိ ကားလမ်းဘေးသို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခြင်း …. ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ၁၀း၄၀အချိန်တွင် ဖြစ်သွားကြောင်းကောလင်းမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည် ။တစ်ဦးမှ သေဆုံးပျက်စီးခြင်းမရှိပါဘူး…..။ငွေအိုး (ကသာ) unicode ကောလငျးမွို့နယျအဝရောဘုရားကှတှေ့ငျ မင်ျဂလာဆောငျသှားလူ၃၀ဦးခနျ့ပါတုနျဖုနျးယာဉျခြောကျထဲထိုးကြ ကောလငျးမွို့နယျ ယှနျးအိုးကြေးရှာအုပျစု ဒိုးပငျကြေးရှာရှေ့ နပေူတောငျအဆငျး(အဝရော ဘရားကှေ့) မိုငျတိုငျအမှတျ ၁၈၃ KM အရောကျတှငျ …. ကသာဘကျမှ ရှဘေိုဘကျသှားသို့ မင်ျဂလာဆောငျသှား […]
ဘယျလိုမြားမောငျးလိုကျတာလဲ ကားဆရာရယျ…ဘုနျးကွီးတဈပါးပြံလှနျတျောမူ သှားကွောငျးသိရ
12 :2: 2020 အုတ်ဖို့ ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲအချိန်လောက်ကအုတ်ဖိုမြို့ တာဆုံအကျော် ပြည် ရန်ကုန်လမ်းတွင် ဘုန်းကြီးကားတစ်စီး လမ်းဘေးထိုးကျ ။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပျံလွန်တော်မူ သွားကြောင်းသိရပါတယ်….။ ဒကာတစ်ဦးကတော့ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်…. ။ ပျံလွန်တော်မူဘုန်းကြီး နှင့် စိုးရိမ်ရဒကာတို့ ကားအတွင်း ညပ်နေ၍ အသင်းအဖွဲ့များမှ ကြိုးစားထုတ်ယူ နေကြပါသည် ။ Credit-Win Zaw / MZT unicode 12 :2: 2020 အုတျဖို့ ယနေ့ နံနကျ ၈ နာရီခှဲအခြိနျလောကျကအုတျဖိုမွို့ တာဆုံအကြျော ပွညျ ရနျကုနျလမျးတှငျ ဘုနျးကွီးကားတဈစီး လမျးဘေးထိုးကြ ။ ဘုနျးကွီးတဈပါးပြံလှနျတျောမူ သှားကွောငျးသိရပါတယျ….။ […]